Tababar lagu baranayo Hanaanka Kalluumeysiga oo laga furay Muqdisho – Radio Muqdisho
Tababar lagu baranayo Hanaanka Kalluumeysiga oo laga furay Muqdisho
Tababarkaan oo ku saabsan qaabka loo jalaaban karo kalluunka wanaagasan, islamrkaana sare loogu qaado tayada kalluunka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Tababarka oo socoto doono mudo lix maalmood ah ayaa waxaa furay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan C/llaahi Cumar Abshirow,waxaana tababarka ka faa’ideysanaya 72-ruux oo ka kala socda shaqaalaha Wasaaradda iyo iskaashatooyinka Kalluunka Gobolka Banaadir.
Agassimaha Guud ee Wasaaradda Kaluumeysiga iyo Khayreedka Badda Dowladda Somaaliya oo ka hadlay furitaanka tababarkaan ayaa sheegay in muhiimada laga leeyahay uu yahay sidii wax badan looga fahmi lahaa hanaanka wanaagsan ee loo kalluumeysto iyo sida looga faa’ideysto.
Wasiirka ku-xigeenka Wasaaradda Kaluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan C/llaahi Cumar Abshirow oo isna ka hadlay tababarka ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya dadaal ugu jirto sidii looga faa’ideysan lahaa Kheyraadka dhex ceegaago baddeena Soomaaliya.
Ugu danbeyntii,Tababarkaan oo muhiimad gaar ah u leh shaqaalaha Wasaaradda Kaluumeysiga iyo Kheyraadka Badda iyo Iskaashatooyinka Gobolka Banaadir ayaa isugu jira labo qeybood oo ay iska kaashanayaan Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Hay’adaha Dowladaha UK Norwey.
WARBIXIN:- Socdaalka Tahriibka oo Qatar geliya dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed